त्यो पिंन पोखरी, यो ढलान- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
त्यो पिंन पोखरी, यो ढलान
गोदावरी नगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमविपरीत पोखरी मासियो
चैत्र ३०, २०७५ दामोदर न्यौपाने, प्रशान्त माली
ललितपुर — आर्किटेक्ट इन्जिनियर पद्मसुन्दर महर्जनले पाँच महिनाअघि सातदोबाटो हुँदै चापागाउँ सडक दायाँबायाँ पोखरीको तस्बिर खिच्दै हिंडेका थिए । सडक दायाँबायाँ मात्र १८ वटा पोखरी छन् । महर्जनका अनुसार सुनाकोठीमा ८, ठेचोमा ६, चापागाउँमा ३ वटा, प्याङगाउँमा १ पोखरी सडक विस्तार चपेटामा परेका छन् ।
डोजरले खन्नुअघिको पिंन पोखरी । तस्बिर सौजन्य : पद्मसुन्दर महर्जन
यी पोखरीलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्दै उनले अध्ययन गरेका थिए । तीमध्येको एक हो पिन पोखरी । यो त्यही पोखरी हो, जुन गोदावरी नगरपालिकाको अगुवाइमा डोजर लगाइयो । यहाँको पानी फालियो । अहिले धमाधम ढलान गरिँदै छ । ‘हामीले पोखरी मास्नु हुँदैन भनिरहेका छौं,’ स्थानीय राकेश महर्जन भन्छन्, ‘तर हाम्रो कुरा सुनिएन । धमाधम ढलान भइरहेको छ । सम्पदा जोगाउनुपर्ने निकाय नगरपालिका नै सम्पदा मास्न लागेको छ ।’
पुरातत्त्व विभागले गोदावरी नगरपालिकाकै बजेटमा पोखरी संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘ठेचोस्थित पिंन पोखरीको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक महत्त्वमा आच नआउनेगरी रीपोखलाई यस्थास्थानमा संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन गोदावरी नगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने विभागीय निर्णय भएकाले सोहीअनुसार गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु,’ संग्रहालय अधिकृत पुरुषोत्तम आचार्यले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
गोदावरी नगरपालिका र प्रदेश सरकारको बजेटमा यहाँ वृद्धाश्रम बनाइएको हो । यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि विभागले स्थलगत अध्ययन गर्न संग्रहालय अधिकृत काजी प्याकुरेललाई खटाएको थियो । काजीले भवन र पोखरी पनि बनाउन भन्दै प्रतिवेदन दिए । उनको प्रतिवेदन प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत दिएको भन्दै अभियन्ताले विरोध गरेका थिए ।
यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पुरातत्त्वले रोक्नु भनेको छैन भन्दै धमाधम ढलान गरिएको थियो । काम नगरोकिएपछि पुरातत्त्वले पोखरी संरक्षण गर्न पत्राचार गरेको हो । विभागका कामु महानिर्देशक दामोदर गौतमले विवादास्पद प्रतिवेदन दिने प्याकुरेललाई केन्द्रमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिने जानकारी दिए । ‘अध्ययन गर्न अर्का कर्मचारी खटाउँछु,’ गौतमले भने, ‘मैले थाहा पाएको ठाउँमा सम्पदा कही पनि मासिन दिन्नँ ।’
पोखरी मास्ने काम गोदावरी नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमविपरीत छ । नगरपालिकाको यो वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पोखरी संरक्षण कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ७ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक जग्गा, वन, जंगल, खोला, खोल्सी, मठमन्दिर पोखरीको संरक्षण प्रारम्भ भएको जनाएको छ । ‘यही हो त संरक्षण भनेको ? पोखरी मासेर संरक्षण हुन्छ ?’ स्थानीय धर्मेन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘नगरपालिकाले उल्टो काम गरेको छ । मुखले सम्पदा संरक्षणको कुरा गर्ने । व्यवहारमा मास्ने ?’
गोदावरी नगरपालिकाले सम्पदा बस्ती बनाउने योजना पनि अघि बढाएको छ । यसका लागि बजेटसमेत छुट्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ७८ बुँदामा प्राचीन बस्ती व्यवस्थित गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त बुँदामा ‘नगरभित्रको सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि विशेष योजना लागू गरिने’ उल्लेख छ । यसका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल समेत गठन गरिने उल्लेख छ । नगरपालिकाको प्राचीन बस्तीमा चापागाउँ, थेंचो, छम्पी, डुकुछाप, बडिखेल, लेले पर्छन् । ‘प्राचीन बस्तीको वास्तुकला भनेकै पोखरी हो,’ आर्किटेक्ट महर्जन भन्छन्, ‘बस्तीमा मठमन्दिर, फाल्चा, ढुंगेधारा, पोखरी जस्ता संरचना पर्छन् । पोखरी मासेपछि बस्तीका सम्पदा के बाँकी रहन्छन् ? सम्पदा सहर बनाउने भनेको के हो ? जापानमा प्राचीन पोखरी जोगाउने अभियान चलेको छ ।’
नगरपालिकाको नीति कार्यक्रममा पोखरी, मन्दिरलगायत सम्पदा संरक्षण गर्न गोदावरी क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्था तथा वित्तीय संस्थालाई आहृवान गर्ने उल्लेख छ । तर आहृवान गर्नु त परै जावस् भएका सम्पदासमेत मास्न नगरपालिका अघि सरेको स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन् । ‘हामीलाई यो विषयमा वैठक र छलफलमा एक पटक पनि बोलाइएको छैन,’ थेंचो सहकारी समन्वय समितीका उपाध्यक्ष चन्द्र गोविन्द महर्जन भन्छन् ।
महर्जनका अनुसार पोखरीका रणनैतिक महत्त्व छन् । थेंचोका ९ मध्ये पिनः पोखरी एक हो । यहाँका सबै पोखरीका प्रयोजन भने अलगअलग छन् । जसमध्ये कोही खानेपानी, कपडा धुन, नुहाउन, कोही भने भाँडा माझ्ने प्रयोजनमा थिए । कोही चौपायालाई खुवाउन र नुहाउने प्रयोजनका लागि खनिएका हुन् । कुनै जलभण्डार, कुनै बर्खामा आउने बाढी रोकेर बस्ती जोगाउन । त्यसमध्ये डोजर चलाइएको यो बस्ती जोगाउन, लुगा धुन, नुहाउने, सिँचाइ, भूमिगत जल भण्डारण प्रयोजनका लागि थियो । ‘पिंन भनेको बस्ती बाहिरको पोखरी हो,’ महर्जन भन्छन्, ‘यो पोखरीको धेरै काममध्ये एउटा खेतबारीमा काम गरेर आउँदा हातगोडा धुने ठाउँ हो । यही सफा गरेर बस्तीमा छिर्ने चलन थियो ।’
सम्पदा मासेर नयाँ संरचना बनाउन लागेका भन्दै यहाँ गुठीयारले पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो पुरातात्त्विक पोखरी हो,’ पूर्णी गुठीका नाइके ज्ञानबहादुर महर्जन भन्छन्, ‘यसलाई मास्नु हुँदैन । तर धमाधम कंक्रिटका पिल्लर ठड्याइएको छ ।’ बस्तीका ऐतिहासिक पोखरीको रेखदेख गुठीले गर्छ । थेंचोमा मूल गुठी ७ वटा छन् । त्यसमध्ये बालुमारी र ब्रहृमायणी गुठी मुख्य हुन् ।
बालकुमारीअन्तर्गत चतुर्दशी गुठी, पूर्णी, पारु र भैरव गुठी छन् । ब्रहृमायणीअन्तर्गत कोना, मु गुठी, न्हेस गुठी छन् । यीमध्ये धेरै सदस्य भएको गुठी ब्रहृमायणी हो । यहाँ करिब ३ सय सदस्य छन् । बालकुमारीमा २ सय ११ गुठीयार छन् । यीमध्ये पिनः पोखरीको संरक्षण ब्रहृमायणी गुठीअन्तर्गतको न्हेस गुठीले हेर्थ्यो । पछिल्लो समय यसले पोखरी संरक्षण गरेन ।
नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन सामाजिक काम गर्न लागेकाले पोखरीमा भवन बनाउनु जायज ठान्छन् । ‘यहाँ व्यापारिक भवन बनाउन लागेको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘वृद्धाश्रम बनाउन लागेको हो । यो सामाजिक काम हो ।’ सामाजिक सेवा गर्ने नाममा सम्पदा मासेको भन्दै अभियन्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ‘वृद्धाश्रम त अरू ठाउँमा पनि बनाउन सकिन्छ,’ आर्किटेक महर्जन भन्छन्, ‘सम्पदा त अरू ठाउँमा सार्न मिल्दैन नि । पोखरी सहरको वास्तुकलाअनुसार बनाइएका हुन्छन् । एउटा पोखरी मासिँदा त्यो बस्तीको वास्तु नै मासिन्छ । प्राचीन वास्तुशास्त्रअनुसार बस्तीमा ३ तहमा पोखरी खनिएका हुन्छन् । एउटा बस्तीको सिरानमा हुन्छ । एक किसिमका बस्तीबीच र अर्को पुछारमा हुन्छन् । पानीविज्ञ पद्मसुन्दर जोशीका अनुसार पोखरी निर्माण मानव सभ्यताको विकाससँगै भएका हुन् । ‘सिरानका पोखरी रणनीतिक हिसाबले खनिएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘बर्खाको भेल बस्तीमा नपोस् भनेर खनिएका हुन्छन् । यस्ता पोखरी ठूला हुन्छन् । माथिबाट आएका पानी नथुन्ने हो भने बस्ती घेरिन्छ । त्यही भएर पोखरी खनिएका हुन् ।’
बस्तीबीचको पोखरीचाहिँ साना हुन्छन् । वर्षाको पानी र कुलोबाट आएको पानी यहीं जम्मा हुन्छन् । भिरालो ठाउँमा बनेका पोखरीले बस्तीलाई बिगार्ला भनेर खनिएका हुन् । यस्ता पोखरी बर्खामा पानी जम्ने, हिउँदमा सुक्ने हुन्छन् । उपभोक्ता समिति अध्यक्ष मिलन महर्जन सडकले पनि पोखरी साँघुर्‍याउने भएकाले यसलाई मास्दा पनि खासै असर नपर्ने बताउँछन् ।
‘कान्ति राजपथ विस्तार हुँदा यसै पनि यो पोखरी साँघुरो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै गुठीयारकै सहमतिमा गरिएको हो । भवनले पोखरी थोरै मात्र मिच्छ ।’ डोजर लगाइएको पोखरी छेउमै हृयामु न्याः पुखुः (रातो माछा भएको पोखरी) जोडिएको छ । यहाँ पहिला राता माछा प्रशस्त हुन्थे । अहिले देखिँदैनन् यहाँ । पानीको सतह पनि घट्दै गएको छ । पोखरी दुर्गन्धित हुँदै गएको छ । ‘केही वर्ष वर्षअघिसम्म हेर्नेको भीड हुन्थ्यो,’राकेश सम्झन्छन्, ‘अहिले यो एकादेशको कथा भएको छ ।’ अहिले यहाँ झ्याल ढोका खुला राखेर बस्नसमेत नमिल्नेउनी बताउँछन् ।
सडकको चपेटामा पनि पोखरी परेका छन् । कान्ति राजपथ विस्तार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । यसको असर सडक छेउमै रहेको तध पोखरीमा पर्छ । यो पोखरी ठेचोको मध्यमखालको पोखरी हो । यसअघि पनि सडकले पोखरी सानो बनाएको थियो । ‘अब बाटो बढाउने हो भने पोखरी छन् साँघुरो हुन्छ,’ महर्जन भन्छन्, ‘यसले यो क्षेत्रको इकोसिस्टमै बिग्रन्छ ।’ पानी विज्ञ जोशीका अनुसार ५० रोपनीमा फैलिएको पोखरीले दैनिक ६ लाख २५ हजार लिटर पानी बाष्फीकरण गर्छ । त्यसले पानी आकाशबाट पानी पर्न सहयोग गर्छ । ‘यस्ता पोखरी जोगाउनुपर्ने हो । तर सम्पदाको महत्त्व बुझिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अब जोगाउन अभियान थाल्नुपर्छ ।’
कतै पोखरी सुक्दै गएका छन् । कहीं सुकेर खेल मैदान बनेका छन् । ठेचोकै सरस्वती मावि छेउको पोखरी जबरजस्ती सुकाइयो । भैंसी नुहाउने पोखरीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको फुंगा पुखु १५ वर्षयता खेल मैदान बनेको छ । ‘पानी थियो,’ महर्जन भन्छन्, ‘स्थानीय युवाले खेल्ने ठाउँ चाहियो भनेर पोखरीपछाडिको डिल भत्काएर सुकाइदिए ।’ सुकाउँदा विवाद पनि भएको थियो । ‘युवाहरूलाई खेल मैदान चाहिने,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई सम्पदा चाहिने । पानी पनि चाहिने । त्यही भएर विवाद भएको थियो ।’
प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ ०८:०३
शल्यक्रियाका बिरामी अलपत्र
चैत्र ३०, २०७५ फातिमा बानु
काठमाडौँ — सरकारी चिकित्सकले सातादेखि गर्दै आएको आन्दोलनका कारण गम्भीर बिरामीका शल्यक्रियासमेत रोकिएको छ । चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बहिस्कार गरेपछि दुर्गमबाट आएका बिरामी अस्पतालमै अलपत्र छन् ।
काठमाडौंको वीर अस्पतालमा बाहिरै राखिएको ओपीडी सेवामा उपचार गराउँदै सर्लाहीका अकबर अन्सारी ।तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर
आकस्मिक शल्यत्रियामा कुनै रोकावट नआए पनि लामो समयदेखि पालो कुरेका सेवाबाट वञ्चित बनेको पीडितले बताए ।
सर्वसाधारणको बढी चाप हुने वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरजस्ता ठूला अस्पतालका बिरामी मारमा परिरहेका छन् । दैनिक ३० देखि ३५ को शल्यक्रिया हुने वीर अस्पतालमा आन्दोलनको आठौं दिनसम्म पालो कुर्नेहरू कुरेको कुर्‍यै भए । चिकित्सक कुरिरहेका बिरामीपक्ष पटकपटक अस्पताल प्रशासन पुग्छन्, आक्रोसित हुन्छन् । ‘हामीलाई थाहा छैन डाक्टर कहिले आउँछन्’ प्रशासनको जवाफले बिरामी चिन्तित छन् । शल्यक्रियाबारे अन्यौल भएपछि केही बिरामी निजीमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य छन् ।
ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत करिब ५० चिकित्सक सरकारी सेवाकै छन् । उनीहरू सबै आन्दोलनमा हिँडेपछि सेवा दिन प्रतिदिन प्रभावित भइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले बताए । उनले भने, ‘शल्यक्रिया आकस्मिक नभए पनि धेरै दिन कुर्न मिल्दैन, जति ढिला भयो उति बिरामीको स्वास्थ्यमा जटिलता आउँछ ।’ अस्पतालमा दैनिक २५ का दरले शल्यक्रिया रोकिँदा कामको चाप थामिनक्नु हुने उनले बताए । हिप रिप्लेस्मेन्ट, जोर्नी रिप्लेस्मेन्ट र मेरुदण्डसम्बन्धी ठूला शल्यक्रिया हुन नसक्दा टाढाका बिरामी बढी प्रभावित छन् । अस्पताल बसाई लम्बिएको र खर्च बढेकामा उनीहरू झनै चिन्तित छन् ।
टेन्ट टाँगेर ओपीडी
आदोलनरत चिकित्सकले वीर अस्पतालबाहिर खुला ठाउँमा बिहीबार र शुक्रबार टेन्ट टाँगेर ओपीडी सेवा चलाए । चिकित्सककै दबाबमा ओपीडीको टिकट भने काटिएन । उनीहरूले टिकटबिनै जाँचेर बिरामीलाई सादा पानामा औषधि लेखेर पठाए । टेन्टभित्र चलिरहेको सेवाबारे नबुझदा बिरामी टिकट खुल्ने आशामा दिनैभर काउन्टर वरिपरि घुमिरहेका थिए ।
उनीहरूलाई सघाउने कोही थिएन । वीरमा आदोलनरत चिकित्सकले सेवा बहिष्कार गरे पनि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत चिकित्सक काम गर्न तयार थिए । न्याम्सका एक चिकित्सकले भने, ‘टिकटमात्रै काट्न दिएको भए हामी बिरामी जाँच्थ्यौं, आन्दोलित डाक्टरले दिएनन् ।’ बिरामी अलपत्र पर्न थालेपछि कर्मचारीले अस्पताल छापबिनैको टिकट बाँडेर न्याम्सका चिकित्सकलाई बिरामी हेर्न आग्रह गरेका थिए ।
अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले भने, ‘टिकट काउन्टर खुल्न नपाउँदा बिरामीले दुःख त पाए, अस्पताललाई पनि दैनिक १० लाख घाटा लागेको छ ।’ सरकारले चिकित्सकलाई मर्का नपर्ने गरि कर्मचारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । ट्रमा सेन्टरमा पनि चिकित्सकले सादा पानामा औषधि लेखेर बिरामी हेरे । आाएजतिले प्राथमिक तहको उपचार पाए । केही बिरामीलाई इमर्जेन्सी कक्षबाट उपचार गराइयो । ३५ बेडको इमर्जेन्सीमा १ सय ५० बिरामी छन् । बेड पुग्नेलाई बेडमा र नपुग्नेलाई कुर्सीमा राखेर उपचार गरेको चिकित्सकले बताए ।
कर्मचारी ऐन विभेदकारी भएको भन्दै सरकारी चिकित्सकले एक सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका कारण शुक्रबार पनि राजधानीका वीर, ट्रमा, कान्ती बाल रअस्पताल र प्रसूति गृहको सेवा प्रभावित बनेको छ । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने चिकित्सकको अडान छ । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘माग पूरा नभए हामी सामूहिक राजिनामा दिन्छौं, संघ नराखे हाम्रो अध्ययनलगायत वृत्ति विकास रोकिन्छ र यसरी हामी डाक्टरभन्दा बढी बधुवा हुन्छौं ।’
प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ ०८:०१
हनुमन्ते कोरिडोर दोस्रो चरणमा
जनप्रतिनिधि हरेक साता सफाइमा
पानी माग्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन [तस्बिरहरु]
दुईपोखरीमा नमूना उद्धार अभ्यास
कोटेश्वरको जाम हटाउन तीन विकल्प